Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Diyaaradaha xambaara ee Maraykanka ayaa lagu arkay saxaraha Shiinaha
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Diyaaradaha xambaara ee Maraykanka ayaa lagu arkay saxaraha Shiinaha.
Xidhiidhka Maraykanka iyo Shiinaha ayaa aad u sii xumaanayay sannadihii u dambeeyay arrimo ay ka mid yihiin ganacsi iyo basaasnimo ilaa xad-gudubka naxariis darada ah ee Shiinuhu ku hayo xorriyaadka dimuqraadiga ah ee Hong Kong iyo hanjabaadda Shiinaha ee Taiwan.
Shiinaha ayaa sameeyay dhoola cadeyn buuxda oo ah maraakiibta dagaalka ee Mareykanka si ay u tijaabiyaan gantaalada lidka maraakiibta.
Waxaa la arkayay jeesjeeska diyaarad nooca Ford-ka Mareykanka ah iyo labo gantaal oo ah nooca Arleigh Burke.
Noocyada noocaan ah ee maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ayaa si joogto ah uga shiraaca meel u dhow biyaha Shiinaha iyo agagaarka Taiwan.
The Machadka Badda ee Maraykanka (USNI) waxa ay daabacday waxa ay sheegtay in ay ahaayeen sawirada dayax gacmeedka ee bartilmaameedyo buuxa oo qaabaysan qaabka Ford-ka Maraykanka iyo ugu yaraan laba gantaalaha wax burburiya ee Arleigh Burke-class. Sawirada waxaa bixisay shirkadda sawirada dayax-gacmeedka ee Maxar.
Maraakiibta dagaalka ee Maraykanka oo la mid ah ayaa si joogto ah uga shiraaca meel u dhow biyaha Shiinaha iyo agagaarkeeda Taiwan.
Milateriga Shiinaha ayaa ka dhisayay goobta gantaallada lagu tijaabiyo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka. USNI ayaa lagu yiri warbixinta.
Sida laga soo xigtay USNI, bartilmaameedka u qaabeysan ayaa markii ugu horreysay laga dhisay saxare fog oo ku taal waqooyi-galbeed ee Shiinaha ee Xinjiang intii u dhexeysay Maarso iyo Abriil 2019, ka dibna inta badan waa la burburiyay bishii Diseembar ee sanadkaas. Dhismuhu waxa uu dib u bilaabmay dabayaaqadii Sebtembar ee sanadkan waxana la soo gebagebeeyay horraantii bishii Oktoobar, ayay tidhi hayadda cilmi-baadhistu.
Marka laga reebo bartilmaameedka ugu weyn ee qaabka xambaara, warbixintu waxa ay sheegtay in ay jiraan laba goobood oo kale oo lala beegsaday oo u eg diyaarad sababo la xiriira dulucdooda. Maxar waxa uu sheegay in goobta ay ka kooban tahay laba bartilmaameed oo leydi ah oo dhererkoodu yahay 75 mitir (246 cagood) kuwaas oo lagu rakibay biraha.
Maraakiibta sida diyaaradaha iyo Arleigh Burke-class waa qayb ka mid ah markabka 7-aad ee Maraykanka, kuwaas oo maraakiibtoodu ay ka shiraacdeen meel u dhow xudduudaha badda Shiinaha, oo ay ku jiraan biyaha ku hareeraysan Taiwan, waxayna ka qaybqaateen dhoolatusyada badda ee Japan, South Korea, iyo Filibiin.
Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha militariga, iyada oo bartilmaameedyada la dhigayo meel u cad dayax-gacmeedyada ajnabiga ah Beijing waxay sida muuqata "isku dayday inay tusiso Washington waxa ay awooddeeda gantaallada sameyn karto."
Mar wax laga weydiiyay arrinta Isniintii, afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha Wang Wenbin wuxuu sheegay inuusan ka warqabin wararka ku saabsan sawirada dayax-gacmeedka.
Bishii Ogosto 2020, Shiinuhu wuxuu tijaabiyay DF-26 iyo DF-21D gantaallada riddada dheer ee ka hortagga maraakiibta, oo ay falanqeeyayaasha qaarkood ugu yeereen "dilaaga sidayaal".
Xidhiidhka Maraykanka iyo Shiinaha ayaa si weyn u sii xumaanayey sannadihii u dambeeyey arrimo ay ka mid yihiin ganacsi iyo basaasnimo ilaa xad-gudubka bahalnimada ah ee Shiinuhu ku hayo xorriyadda dimuqraadiga ah ee Hong Kong iyo hanjabaadda Shiinaha Taiwan.